Versiondị ọhụrụ nke Cloud Hypervisor 0.3 bịarutere, oghere mepere emepe VMM | Site na Linux
Intel kwupụtara mwepụta nke mbipute ọhụrụ nke hypervisor "Igwe ojii Hypervisor 0.3" Kedu nke eỌ bụ ihe na-emeghe iyi mebere igwe ileba anya nke na-agafe KVM. Ihe oru ngo na-elekwasị anya na-arụ ọrụ nke oge a na igwe ojii, gbakwunye usoro nhazi akụrụngwa na akụrụngwa dị oke.
Igwe ojii na-arụ ọrụ na-ezo aka na nke ndị ahịa na-arụkarị n'ime igwe ojii. Onye hypervisor dabere na ngwongwo nke ọrụ Rust-VMM, nke Alibaba, Amazon, Google na Red Hat na-esonye, ​​na mgbakwunye Intel.
E dere Rust-VMM na Rust ma nye gị ohere ịmepụta hypervisors akọwapụtara maka ọrụ ụfọdụ. Igwe ojii Hypervisor bụ otu n'ime ndị nlekọta ahụ na-enye ọkwa dị elu Virtual Machine Monitor (VMM) ma kachasị ya mma iji merie nsogbu nke igwe ojii na-agụpụta.
Cloud Hypervisor na-elekwasị anya n'ịhapụ nkesa Linux nke oge a iji paravirtualized virio ngwaọrụ.
N'ime ọrụ ndị dị mkpa pụtara: nzaghachi dị elu, obere nchekwa nchekwa, arụmọrụ dị elu, nhazi dị mfe ma belata ndị ọgụ ọgụ.
A na-ebelata nkwado nkwado ma mesiri ike na paravirtualization. Ugbu a naanị sistemu x86_64 na akwado, ma atụmatụ ndị ahụ gụnyekwara nkwado maka AArch64. Nke usoro ndị ọbịa, ugbu a Naanị 64-bit Linux na-ewu na-akwado. A na-ahazi CPU, ebe nchekwa, PCI na NVDIMM na ọkwa ụlọ na igwe ọrụ ntanetị nwekwara ike ịkwaga n'etiti sava.
Koodu oru ngo a di n’okpuru akwukwo ikike Apache 2.0.
Njirimara ohuru nke Cloud Hypervisor 0.3
Na ụdị ọhụụ a nke Cloud Hypervisor 0.3 pụtara mkpochapu para / megharia I / O na usoro ndi ozo. Maka mmekọrịta na ngwaọrụ ngọngọ, agbakwunyela ikike iji vhost-user-blk backends.
Mgbanwe na-enye ohere iji jikọọ ngọngọ ngwaọrụ dabere na modul -user modul, dị ka SPDK, na Cloud Hypervisor dịka nkwụghachi maka nchekwa paravirtualized
El Nkwado maka iwepu arụmọrụ netwọk na azụ azụ vhost -user-net nke pụtara na mbipute gara aga na-agbatị na nkwado ọhụrụ dabere na TAP virtual network njikwa. Edere azụ ahụ na Rust ma Cloud Hypervisor na-eji ya ugbu a dị ka isi ụlọ ọrụ ntanetị.
Iji mee ka arụmọrụ na nchebe nke nkwukọrịta dị n'etiti gburugburu ebe obibi na usoro ndị ọbịa, a na-emejuputa ngwakọ ngwakọ nke nwere njikọ AF_VSOCK (mebere ntọala netwọk), na-arụ ọrụ site na virio.
Ihe mmejuputa a bu ihe omumu nke oru Firecracker, nke Amazon meputara. VSOCK na-enye gị ohere iji ọkọlọtọ POSIX soket API maka mmekọrịta dị n'etiti ngwa na usoro ndị ọbịa na ndị ọbịa, nke na-eme ka mmegharị nke mmemme netwọk oge niile maka mmekọrịta dị otú ahụ ma mejuputa mmekọrịta nke ọtụtụ mmemme ndị ahịa na ngwa sava.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara ìhè bụ na enyere nkwado mbu maka API njikwa site na iji usoro HTTP. N'ọdịnihu, API a ga - enyere gị aka ịmalite arụmọrụ asynchronous na sistemụ ndị ọbịa, dịka ịtinye ihe ọkụ ọkụ na gburugburu ebe obibi.
Ihe ngosi bu nke puru iche nke oyibo nwere ezigbo MMIO (nke oma a na-echekwa ihe omuma) nke sitere na mmejuputa njem, nke enwere ike iji meputa usoro ndi nleta nke na-achoghi i busomi ugbo ala PCI.
Dịka akụkụ nke ebumnuche iji gbasaa nkwado maka mbido ndị ọbịa agbakwunyere, Cloud Hypervisor agbakwunyela ikike ibugharị ngwaọrụ IOMMU paravirtualized site na omume, nke nwere ike ịbawanye nchekwa nke mbugharị na ntinye ngwaọrụ.
N'ikpeazụ nke ndị ọzọ novelties na-pụta ìhè na ad, bụ sNkwado enyere maka Ubuntu 19.10, nakwa nwekwara ikike agbakwunyere iji sistemụ ndị ọbịa nwere karịa 64GB nke RAM.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, yana inwe ike ịrụ ọrụ na Hypervisor a, ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Versiondị ọhụrụ nke Cloud Hypervisor 0.3 abịarutere, oghere mmeghe VMM
Ndị na-agba ọsọ mebiri netwọkụ nke Avast n'ihi na onye ọrụ enweghị A2F